Tag: cheka-mukati | Martech Zone
15 Mobile Kushambadzira Matipi ekutyaira Zvimwe Kutengesa
Chipiri, July 31, 2018 Chipiri, July 31, 2018 Chris Richardson
Mumusika wanhasi unokwikwidza, chinhu chimwe ndechechokwadi: yako yekushambadzira epamhepo kuyedza inofanirwa kusanganisira nzira dzekushambadzira nhare, kana zvikasadaro unenge uchishaya miitiro yakawanda! Vanhu vazhinji nhasi vakapindwa muropa nemafoni avo, kunyanya nekuti ivo vajaira avo masocial media chiteshi, kugona kutaura ipapo nevamwe, uyezve kudiwa kwe "kuramba uchimhanyisa" nezvinhu zvakakosha kana zvishoma kukosha. . SaMilly Marks, nyanzvi pa
NeChishanu, Nyamavhuvhu 7, 2015 NeChishanu, Nyamavhuvhu 7, 2015 Douglas Karr
Pakupera kwegore rino, pamusoro pe80% yevakuru veAmerica vanenge vaine smartphone. Nharembozha dzinotonga zvese zviri zviviri B2B uye B2C nharaunda uye mashandisiro avo anotonga kushambadzira. Zvese zvatinoita iye zvino zvine nharembozha kwazviri yatinofanira kuisa mukati medu nzira dzekutengesa. Chii chinonzi Kushambadzira Kwenharembozha kushambadzira kushambadzira pane kana nenhare mbozha, senge smart phone. Kushambadzira kwenhare kunogona kupa vatengi nguva nenzvimbo
NeChishanu, Gumiguru 26, 2012 Douglas Karr
Matsamba edu akaonda zvishoma, asi ndakafara kuona uyu mushumo wenzvimbo wakazara uchibva kuFoursquare maminetsi mashoma apfuura! Chirevo chinopa snapshot yevhiki nevhiki pamusoro pekuti ndiani akapinda mukati, chii chinosvika, kunyangwe vakagovana cheki-in, uye vatengi vepamusoro. Ehezve, kune zvekare kufona-kune-chiito kumhanyisa mimwe mishandirapamwe pane ino saiti, zvakare… saka Foursquare iri kutsvaga kuwedzera mari yavo. Kudos kuenda kuchikwata cheMakona mana, zvakadaro
Handina chokwadi kana ndiri mune vashoma pane enzvimbo masevhisi, asi ndinonakidzwa nekushandisa Foursquare uye kutarisa munzvimbo dzese. Chinhu chinonakidza ndechekuti ini handiwanzo govana ma check-ins angu, uye handimbo tombotora mukana wehunyanzvi hwavanopa. Saka nei ndichizviita? Hmmm… Handina kuziva izvozvo. Ini ndinofarira iyo yekuti yazvino vhezheni yeFreesquare app inondikurudzira kutarisa-mukati kana ndiri padhuze